गण्डकी र सुदूरपश्चिम कोरोनाको जोखिममा अहिले ९ जना कोरोना सङ्क्रमित बिरामीको पहिचान भएको छ । सङ्क्रमित ९ जनालाई आधार मान्दा क्षेत्रगत हिसावले काठमाडौँ, बागलुङ, कैलाली, कञ्चनपुरमा जोखिमको देखिन्छ । शनिबार, चैत २९, २०७६
के पैसाबाट कोरोना भाइरस सर्छ ?(अडियोसहित) आईतबार, चैत २३, २०७६ सकेसम्म धेरै पैसा कमाउने र दुःख गरेर कमाएको पैसा जोगाएर राख्ने बारेमा धेरैले सोचे पनि महत्वपूर्ण ठानेको पैसा अर्थात् नोटमा जीवन नै जोखिममा पार्ने भाइरस हुन्छ भन्ने बारे थोरैले मात्र सोचेका हुन सक्छन् ।
स्वास्थ्य, प्रविधि र धर्ममा कोरोना अवसर बन्दै मंगलबार, चैत १८, २०७६ अर्थशास्त्रीहरूले विश्वको अर्थतन्त्रमा ११ रेक्टर स्केलको भूकम्पजत्तिकै धक्का लाग्ने भनिरहेका छन् । तर धेरैले महामारीपछिको दुनियाँ यसअघिको भन्दा खराब होइन झन राम्रो हुने आँकलन गरिरहेका छन् ।
कोरोनाभाइरस बारेको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत हुँदै शुक्रबार, फागुन २३, २०७६ आजको बैठकमा सांसद गगन कुमार थापाले “विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई कोरोनाको उच्च जोखिम भएको देशमा सुचीकृत गरेको सन्दर्भमा यससँग जुध्न सरकारले के गरेको छ, अस्पतालको अवस्था के छ भन्ने जस्ता प्रश्नहरू सरकारले सदनलाई जानकारी दिनुपर्ने भएको तथा कोरोना विरुद्ध सबै जुटी राष्ट्रिय संकल्पको साथ अगाडि बढ्नु पर्ने भएकोले” भन्ने विषयको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने छ ।
राज्यले भुल्दै गएको सुखानी शहीद परिवारको गुनासो (अडियोसहित) बुधबार, फागुन २१, २०७६ २०२९ साल कात्तिकमा प्रहरीले पक्राउ गरेर झापा जेलमा राखेको थियो भने तत्कालीन कम्युनिस्टहरूले जमिनदारलाई सफाइ गर्ने अभियान चलाएका थिए । झापाबाट इलाम जेल सार्ने बहानामा सुखानीको जङ्गलमा राति पाँचै जनालाई गोली हानिएको थियो ।
बाल विवाहमुक्त गाउँ बनाउने हो कि नाइँ ? शुक्रबार, फागुन १६, २०७६ प्रदेश सरकारले बालविवाह रोक्न ‘बैंक खाता छोरीको, सहारा जीवनभरीको’ भन्ने कार्यक्रमलाई कर्णालीका हरेक घर र नयाँ जन्मिने छोरीसँग जोडेको छ । तर, अभाव, अशिक्षा र गरिबीका साङ्ला तोडेर बालविवाहको समस्या कसरी कर्णाली तराउने ? प्रदेश सरकार नजन्मिदै जन्मिएका, कचहरीमा प्रश्न गर्ने छोरीहरूले भने उत्तर पाउन सकेका छैनन् ।
विकासमा जनप्रतिनिधिको डोजर बिहिबार, माघ २३, २०७६ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गएको बर्ष भदौमा जनप्रतिनिधि डोजर मालिक बनेको विषयमा अध्ययन गरेको थियो । करिब ३ हजार जनप्रतिनिधि डोजर मालिक भएको निचोड निकालिएको थियो । अध्ययन भएपनि कारवाही पक्रिया भने अगाडी बढ्न सकेन ।
दार्जिलिङमा भारी बोक्ने नेपालीको कथा शुक्रबार, माघ १७, २०७६ वर्षभरी भारी बोकेर मिलेसम्म चाडबाडमा घर जाउँला अनि उतै बसौला भन्ने योजना सबैले बनाउँछन् । तर, सबैको योजना सफल हुँदैन । भारीले थिचिंदै योजना योजनामा नै सकिन्छ । वर्षौदेखि घर नगइ बसेकाहरू पनि छन् । तर मनभरी घरको सम्झना र देशको माया सबैसँग छ ।
वैदेशिक रोजगारीका विवाद मेलमिलापबाट टुङ्गो लाग्दै मंगलबार, माघ १४, २०७६ अब मेलमिलाप केन्द्रमै वैदेशिक रोजगारीका क्रममा भएका गम्भीर प्रकृतिका अपराध बाहेकका मुमा मिलाइनेछ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधिले मिलापत्र गर्ने व्यवस्था गरेपछि बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को पछिल्लो संशोधनमा मिलापत्रको व्यवस्था गरिएको छ ।
छाउपडीविरुद्ध अदालतको पहिलो कारबाही शुक्रबार, माघ १०, २०७६ मृतक पार्बतीका जेठाजु छत्र रावतलाई मुलुकि अपराध संहिता २०७४ को दफा १६८ को उपदफा ४ बमोजिम ४५ दिन कैद फैसला गरिएको हो । गत मंसिर १५ गतेराती पार्बतीको छाउगोठमा मृत्युभएपछि उहाँका जेठाजु रावतलाई चारदिनपछि १९ गते प्रहरीले पक्राउगरी मुद्दा चलाएको थियो ।
नेपालमा कोरोना भाइरसको जोखिम उच्च बिहिबार, माघ ९, २०७६ शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका डा.अनुप वास्तोलाले चीनमा देखिएको कोरोना भाइरस चिनियाँ पर्यटक र नेपालबाट चीन गएका नेपाली नेपाल फर्कँदा भित्रिन सक्ने जोखिम रहेको बताउनुभयो ।
जिम्मेवारी श्रीमतिको, काम गर्ने श्रीमान बुधबार, माघ ८, २०७६ देशका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये प्रदेश २ का ८ जिल्लामा एउटा महानगर, ३ उपमहानगर, ७३ नगरपालिका र ५९ गाउँपालिका गरि एकसय ३६ स्थानीय तह छन् । दर्जभन्दा बढी जिम्मेवारीको नेतृत्व लिएका धेरै स्थानीय सरकारका उपप्रमुखले श्रीमानको निर्देशनमा काम गरिरहेका छन् ।